Antso Ho Famotsorana Ilay Mpanao Gazety Sy Mpakasary Espaniola Nalaina An-keriny Tao Syria · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Desambra 2013 3:18 GMT
Araka ny filazan'i El Mundo, nanjavona i Espinosa sy Vilanova tamin'ny 16 Septambra raha teny an-dalana ho any amin'ny faritr'i Raqqa ao Syria, ka nalain'ny Fanjakana Islamika ao Iraka sy Syria [ISIS] an-keriny avy eo, niaraka tamin'ireo mpiadin'ny Tafika Syriana Afaka efatra. Navotsotra ireo mpiady 12 andro taty aoriana. Saingy mbola any am-pigadrana foana kosa ireo mpanao gazety nanomboka ny daty niheveran'ny ISIS azy ireo fa mpitsikilo, araka ny hita tamin'ny tatitra an-gazety espaniola.
Tsy sambany nankany Syria i Espinosa hatramin'ny nisian'ny fitroarana. Nieren-doza tamin'ny daroka baomba izay nahafaty ilay mpanao gazetin ‘ny Sunday Times, Maria Colvin tamin'ny volana Febroary 2012 izy. Nilaza ilay mpisera Twitter, The 47th, fa tsy niraharaha ny vono-olona voalohany nataon'i Assad izao tontolo izao, tsy nisalasala hitsangana hanohana ny rariny i Espinosa:
Nanamarika ihany koa ilay mpisera Twitter Yalla Souria fa nosamborin'ny ISIS sy ny fitondran'i Assad ny olona tahaka an'i Mompera Paolo, Espinosa ary Vilanova:
Nalain'ny ISIS a an-keriny tao Syria ilay mpitati-baovao espaniola be herim-po @javierespinosa2 . Avereno eny anivon'ny fianakaviany sy ny namany izy.
Fantatra amin'ny fandraketana an-tantara mahagaga momba an'i Libya, Ejypta, Syria nandritra ny Lohataona-Arabo ihany koa i Vilanova.
Mandraisa anjara eto amin'ny hetsika famotsorana azy ireo.